Dyeing na gụchara technology ezi ngwaahịa mmepe na ọhụrụ (atụ aro collection) - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Dyeing na gụchara technology ezi ngwaahịa mmepe na ọhụrụ (atụ aro collection)
1. Gas / mmiri mmiri eruba dyeing usoro
Traditional gas / mmiri mmiri eruba dyeing na-bụ-eji maka pretreatment na dyeing ndị a kpara nke ma ọ bụ chemical eriri akwa, mgbe ọhụrụ gas / mmiri mmiri eruba dyeing nwere ike izute chọrọ nke multi-nzukọ, multi-style, obere ogbe na iche iche iche na owu na ya multi-eriri kpara akwa, na ike ga-eji dị ka a na-arụpụtakwu emeju maka na-aga n'ihu ma ọ bụ na oyi na-atụ nnukwu dyeing.
Na ngwaahịa mmepe na ọhụrụ, gas / mmiri mmiri eruba nwere ike na-aghọta na Nchikota dyeing na style finishing:
(1) rụrụ mgbanwe (full isiike), peng soft elu-agbanwe akwa, karịsịa nwere polyester akwa;
(2) n'elu shrinkage udidi nke crepe (dị ka owu brocade ákwà, "nnu shrinkage" mmiri e sijiri ákwà, yarn kpara na dị iche iche nje ọgụ ọnụọgụ);
(3) cylinder tupu ọgwụgwọ, dyeing eke shrinkage, eke udidi nke obere crepe ntụrụndụ style ákwà;
(4) mkpa ákwà, Jacquard ákwà, abụọ ala ogologo na weft oké fere fere na-akpa ákwà;
(5) suede akwa (owu, polyester na brocade mejupụtara silk, n'elu udidi doro anya, na-eche na ajị anụ, -adịghị ahụ anya);
High agba fastness akwa (ọchịchịrị mmiri rubbing fastness n'elu ọkwa 3, multi-eriri ntụpọ agba n'elu ọkwa 4 ụmụ \_ 's wear, tooling akwa);
7. Ngwaahịa nwere protein emep uta eri (dị ka ajị anụ, silk na oke bekee ntutu);
"Salt Ada Ada" linen ngwaahịa, TM ngwaahịa, mkpa viscose akwa, ike ighikota na klas.
2. Traditional mercerization na "nnu shrinkage"
Ịta nke omenala mercerized ncha bụ n'ozuzu 23 ~ 26° Nwee, na ọzịza nke cellulose na-ejedebeghị. Na mgbakwunye, n'okpuru ọnọdụ nke erughị ala, na infiltration nke ncha n'ime eriri cystic oghere ga-gbochie, nke dị mfe ime ka elu mercerization. "Salt shrinkage" bụ ojiji nke 36° Ike ncha mercerizing n'okpuru erughị ala-free ọnọdụ, na-eme ka eriri-emepụta full ọkọ na mkpi, mmetụta bụ dịkwuo na agba na luster nke ákwà na njuputa, ọgaranya na uko mmetụta, imecha na mgbanwe, adabara owu akwa na linen akwa. Dị ka flax eriri bụ ùkwù Ọdịdị, mgbe "salt shrinkage" ọgwụgwọ, ọ ga-emepụta ihe na oké mkpi, ime na ákwà na-akpa ákwà na-ọzọ kọmpat, amị a n'echiche nke tightness na-apụghị kpụrụ site ịkpa ákwà. Sochirinụ ma ọ bụ omunnu shrinkagea mgbe "salt shrinkage" na-arụpụta dị iche iche shrinkage mmetụta.
Fabric si "nnu shrinkage" usoro
Na mgbakwunye, dị iche iche ncha nwere ike mercerize mudale na nkịtị viscose eriri, melite agba unevenness na ala na agba saturation nke 2 di iche iche nke eriri mgbe ji ekpuchi na owu eriri
3. Emery egweri na ndu polishing
N'oge nhazi na uzuzu uwe akwa, uwe elu akwa, mkpa ákwà n'elu ọcha, na-egbuke egbuke ma dị ọcha, doro anya udidi, adụ luster, obi na-adị bụ enwekwa (efu apụghị ịhụ, ma costumers) mmetụta, nwere ike iji ụzọ Emery egweri Mao (240/400, iri na abụọ, anya nke dị iche iche akwa na-jikọtara), na mgbe ahụ, mgbe ndị biopolishing, wepụ elu nke ntutu, nweta nke microvilli, suede style mmetụta.
Emery frosted na biopolished ákwà
N'ihi na dị ọcha tiansi TM ákwà, Emery egweri na bio-polishing nwere ike iji belata Abrasives mere site raw eriri, na-emepụta na mmetụta nke rọrọ obi na-adị na peach akpụkpọ, na ọbụna na siri aka na elu àgwà. Usoro a nwekwara ike a n'ọrụ polyester / naịlọn mejupụtara silk na ákwà iji belata nsogbu nke oke nro na waxy ákwà mere site alkali Mbelata, nke mere na ọ nwere ike mma izute chọrọ nke ifufe uwe na jaket ákwà ya richness na ire ụtọ.
4, ihuenyo mkpuchi technology
Screen mkpuchi technology na-bụ-eji zụlite otu otu absorption (otu akụkụ mgbochi ikwommiri mmiri, otu akụkụ nwere ike banye mmiri) na abụọ na-agba akwa. Kpara akwa nke waterproof na mmiri permeable na tumadi ekewet nke Schoeller \_ 's 3 xdry ® gụchara technology, na waterproofing gị n'ụlọnga na thickener na-gbanwee viscosity na 16000 ~ 18000 mPa s. (nkịtị ebi akwụkwọ tapawa viscosi~y nke 4000 ~ 5000 mPa, s), maka ike nke ákwà adopts full ikpughe na ọkpụrụkpụ nke elu nickel ntupu netwọk ga waterproof slurry n'elu na ákwà na lattice ndokwa ụdị, arịrịọ bụ infiltration ọnọdụ, na-aghọta otu waterproof, mmiri, breathable, otu ụzọ na-mmiri absorption igba ajirija ọrụ, nwekwara a ụfọdụ ifufe ọrụ. Na shi trafigura ebu mkpuchi igwe, rotary ihuenyo ebi akwụkwọ igwe abụghị nke a craft, mfe ibipụta site, mkpumkpu), atụmatụ nwere ike na-aghọta yiri mmetụta nke bonding PTFE film, na mmepụta na-eri, inogide na quality kwụsie ike nwere ibu uru, ụdị ákwà adabara ala osisi ike mmega, ukwuu na-eji na-emepụta ejiji na ntụrụndụ na egwuregwu uwe, na ọtụtụ na mmiri na ụbịa ekike.
Akwa-emeso ya na 3XDRY® technology
Na mgbakwunye, na ojiji nke ntupu mkpuchi technology nwekwara ike-eji na-ebipụta dị iche iche na agba nke nọ n'ọrụ na agba, abụọ na agba mmetụta, adabara ogologo ọkpa, jaket akwa.
5. Short usoro pretreatment technology nke mgbagwoju ndu enzymes
Traditional owu ákwà desizing eji amylase ma ọ bụ caustic soda / hydrogen peroxide, na-eji na-aga n'ihu ma ọ bụ oyi chernobyl na usoro iji wepụ na size na ákwà. Na mwepu bụ ndakọrịta. Amylase naanị erekasịchaala starch, ma ọ dịghị mmetụta PVA. Caustic soda / hydrogen peroxide oyi chernobyl nwere otu mwepụ mmetụta PVA, ma ọ nwere ike iwepu starch slurry, na na ọ bụghị adabara multi-eriri ngwaahịa. Na mgbakwunye, e nwere ụfọdụ nsogbu ndị dị otú ahụ dị ka ihe siri ike omume nke n'efu mmiri, ike obi na-adị, na mfe imepụta sliver.
Onyinye ndu enzyme pretreatment usoro bụ ojiji nke amylase, catalase, pectinase, hydrogen peroxide, ndị na-abụghị ionic emulsifier, ozugbo ma ọ bụ mgbe singeing na mpe mpe akwa na-arụ ọrụ ọmụmụ, na mgbe okpomọkụ ichebe ikpo 12h n'elu, mgbe mkpa ákwà ozugbo ịcha ọcha, oké ákwà ozugbo sie bleaching.
Uru nke obere usoro pretreatment nke mgbagwoju enzymes na-agụnye:
(1) obosara ime mgbanwe nke eriri, mfe mmepụta akara;
(2) pulp nwere nnukwu mwepụ ọnụego na nwere ike isi nweta PVA umuihe. Ọ nwere doro anya uru na ngwa nke elu-ọnụ na elu-njupụta akwa.
(3) ya nwere doro anya uru na ngwa nke elu-agbanwe na ji ajị anụ kpaa akwa;
(4) doro anya uru na ike na nchekwa umu, emission Mbelata na oriri Mbelata;
(5) ya nwere ike isi nweta nkewa nke nsị ịta na dilution, nke bụ eme ka akụ itinye n'ọrụ.
(isi mmalite: akaụntụ gọọmentị nke na-eji akwa ederede)
Nka nka na ụzụ | chọrọ ịmara ka esi eme ọgbụgba na ọnya isi na akwa egwuregwu?Pịa iji nwetakwuo ndị ọzọ
The style e ji mara nke nkịtị owu ụdị ákwà na nhazi ọkwa niile nọ n'ebe a!